किन जन्मिन्छन् जुम्ल्याहा ? के हुन् जुम्ल्याहाका प्रकार – Nepalpostkhabar
किन जन्मिन्छन् जुम्ल्याहा ? के हुन् जुम्ल्याहाका प्रकार
Hemant KC । ९ चैत्र २०७६, आईतवार ०५:५५ मा प्रकाशित
एजेन्सी ः कतिपय महिलाले जुम्ल्याहा बच्चा चाहन्छन् । गर्भावस्थामा जुम्ल्याहा बच्चा हुनुका कैयौँ कारण छन् । आमाको कारणले मात्र जुम्ल्याहा बच्चा हुँदैन । यसमा बुवाको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । यो एक प्राकृतिक तरिका हो । यसलाई सुधार गर्ने कुनै उपाय या उपचार छैन । यी हुन् जुम्ल्याहा बच्चा जन्मनुका कारण ः
यस्तो बच्चा जन्मनुमा ठ्याक्कै कुन कारण हो भन्ने पत्ता लागेको छैन । २५० गर्भवती महिलामध्ये एक जुम्ल्याहाको सम्भावना हुन्छ । यद्यपि सबै महिलामा यसको सम्भावना हुन्छ ।
कुनै नश्लीय समूहमा यस्तो बच्चा जन्मनुलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । नाइजेरियामा जुम्ल्याहा बच्चा जन्मने दर निकै बढी छ भने जापानमा निकै कम ।
बढी उमेरका महिलामा जुम्ल्याहा बच्चाको सम्भावना पनि बढी हुन्छ । त्यो किनभने ओबुलेसनको क्रममा बढी उमेरका महिलाले एकभन्दा बढी अन्डको निर्माण गर्छन् ।
यो एउटा वंशाणुगत कारण पनि हो । जुन पुस्तौँपुस्तासम्म चल्ने पनि गर्छ । यस्ता महिलामा एकभन्दा बढी अन्डको निर्माण गर्ने आनुवंशिक गुण प्राप्त हुन्छ ।
इन विट्रो फर्टिलाइजेसनमा जुम्ल्याहा बच्चा हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो प्रक्रियालाई नेपालमा टेस्ट्युब बेबी भन्ने पनि गरिन्छ । यस्तो प्रक्रियामा एकभन्दा बढी भ्रुणको स्थानान्तरण गरिन्छ ।